arunsubedi: January 2016
कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी | Published: December 28, 2015 | सोमबार 13 पुष, 2072 | 12:28 PM | Viewed: 1752 times
4 1 Google +000
अरुणकुमार सुवेदी -
विगत ३/४ महिनाको समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक असरहरु उपर चर्चा गर्नमै नेपाली प्रेस, आम जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माण सबै ओझेलमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक समस्या, भारतसँगको कुटनीतिक असफलता र रणनीतिक गोलचक्करका परिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्‍यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कन्फ्युज्ड मधेस (मधेसी)
मधेश आन्दोलन जे उद्देश्यबाट जसको पृष्ठपोषणमा उठाईएको थियो, तिनीहरुको तत्कालिन उद्देश्य पूर्ति भइसकेता पनि आन्दोलनको अवतरण गर्नलाई सकस परेको अवस्था छ । संविधानको मस्यौदा आउनसाथ वीरगंजबाट स्वःस्फुर्त सुरु भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलनले अहिलेको संविधानको सुत्रधारहरुलाई सतर्क बनायो । विकराल स्वरुप ग्रहण गर्न सक्ने उक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पारी धर्म निरपेक्ष संविधान लिएर आउन तीनवटा रणनीतिलाई अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो रणनीति अन्तर्गत संविधानसभा बाहिर रहेको र उपद्रो मच्चाउन सक्षम समुह वैध माओवादी र चन्द माओवादीलाई लिपुलेकको मुद्दा दिइयो । जसले चीन र भारत दुबैलाई बचावको अवस्थामा पु¥यायो । सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मनिरपेक्षता प्रति असहमत चीन र भारत लिपुलेक मुद्दाको बचावको रणनीतिमा लाग्नु प¥यो । दोस्रो रणनीति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र अरु दलका केही उच्च नेताहरुलाई हिन्दु राष्ट्र परस्त भएको आम प्रभाव पार्न र हिन्दु राष्ट्रवादीलाई आक्रामक बन्न नपर्ने जस्तो वातावरण निर्माण गर्न लगाईयो । तेस्रो रणनीति अन्तर्गत भारतको धर्मनिरपेक्षतावादीहरुले मधेसका कद्दावर नेताहरुलाई लखनउमा डाकेर मधेस आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन तयार पारियो ।
यसै नीति अन्तर्गत तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपालका शासकहरुले भारतको केन्द्रलाई दोषारोपण गरेर मोदीलाई अरु बचावको अबस्थामा पुर्‍याए भने तराईका नेताहरु पनि त्यही प्रभाव दिन पछि परेरन् । यो सबै बखेडामा मधेसका जनतामाथि पृथकतावादीको प्रभाव बढ्दै गयो । भारतको केन्द्रीय सरकारको ठूलो समर्थन छैन भन्ने कुराको ज्ञान भएका भारतको धर्म निरपेक्षतावादी प्रतिपक्षसँग असल सम्बन्ध रहेका नेपालका शासक दलहरुले यही मौका छोपेर मधेसका मुल प्रवाहका नेताहरुलाई कुनामा धकेल्ने र भारतको केन्द्र सरकारलाई घेर्ने काम सुरु गर्‍यो । अब आएर मधेसका युनियनिष्ट शक्तिहरुमा ठुलो अकर्मण्यता छाएको छ । धर्म निरपेक्षतावादी संविधान आइसकेको अवस्थामा अवतरणको स्थान खोजौँ त पुरा नांगिने, आन्दोलन हाँकौ भने झन् युनियनिष्टहरु कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ ।
मधेस आन्दोलनका कारणले बिहार चुनाव हारेका, मधेसका कुनै नेताहरुसँग खास सम्बन्ध नभएको तर मधेस आन्दोलनबाट यथेष्ट अपजस भोगेका मोदी पनि अब एक्सनमा निस्किएका छन् । यही एक्सनको एउटा पहल हो मधेसी नेताहरु माथिको दिल्ली ‘समन’ । अब मधेसी नेताहरुले कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी मोदीसँग ‘प्याचअप’ हुने भए धर्म निरपेक्षता विरुद्धको अभियान लिएर मधेसी दलहरु आउनै पर्छ, अन्यथा धर्म निरपेक्षतावादीको सल्लाहमा कांगे्रसको संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट फेस सेभ गरी अवतरण गर्नैपर्छ । जे गरे पनि मधेस मुद्दामा किचलो भने लामै चल्ने स्पष्ट छ । अब मधेसी नेताहरुले मोदीको निर्देशनमा अगाडी बढ्ने बाचा गरे धर्म निरपेक्षता पक्षधर भारतीय दलहरुले किचलो बढाउनेछन् । नभए भारतको केन्द्र सरकार नै मधेस आन्दोलनको दमनको शुप्त मतियार हुनेछ । यो दोधारको अवस्थाले मधेसका नेताहरु स्पष्टताका साथ उभिन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ शक्ति ठुलो खर्चको फितलो तुरुप
नेपाली कांग्रेसको तराई जनमत धरापमा पर्दै जानु र धर्म निरपेक्षताको कारणले परम्परागत आधार पनि खस्कने क्रममा रहेबाट कांग्रेस पार्टी कुनै पनि बेला आफ्नो जनाधार व्यापक बनाउने क्रममा धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध लाग्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । यसका केही नेताहरुले यस्तो अडान राख्दै आएका छन् भने कार्यकर्तास्तरमा यस पक्षको अत्याधिक बहुमत नै छ । यस कारण भारतका धर्म निरपेक्षतावादी शक्ति र पश्चिमलाई कांग्रेस विश्वासिलो भइ नरहेको अबस्थामा नयाँ सेक्युलर शक्तिको आवश्यकता खस्किन थाल्यो । यही आवश्यकताको पूर्ति हेतु भारतको धर्म निरपेक्षतावादी कोखबाट पश्चिमा बीजले ‘सेरोगेसी’ गरी जन्माउन लागेको दलको गर्भरुप नै बाबुरामजीको नयाँ शक्ति हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । यसैले बाबुराम भट्टराईले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर सबै जातिको महाजाति पहिचान अर्थात हिन्दु पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने लाईन लिनुभएको छ । योजक पहिचानलाई समाप्त पारेर जातीय पहिचानलाई उग्र पारिनु कालान्तरमा विखण्डनको अवस्था निर्माण गर्ने प्रारम्भिक रणनीति हो भन्ने मेरो ठहर छ । उहाँका अहिलेका क्रियाकलापहरु पनि मधेसीहरुलाई आफुसँग सहकार्य गराउने र मोदीसँग दुरी कायम गराई भारतीय प्रतिपक्षको रणनीतिक साझेदार बन्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
विवस बन्दै मोदी
मोदीको नेपाल नीति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षपोषणलाई असफल बनाउन सहकार्य गरेका नेपालका दलहरु, भारतको प्रतिपक्ष र केही मधेसी दलहरुका कारणले अहिले आएर मोदीलाई प्रतिपक्षबाट मात्र नभएर आफ्नै दलभित्र पनि ठुलो विरोध खेप्नु परेको छ । भारतका सबै प्रतिपक्षहरुले नेपाल नीतिको विरोध र धर्मनिरपेक्षतावादी संविधानको समर्थन गरेका छन् । कम्युनिष्ट, जनता परिवार र राष्ट्रवादी कांगे्रसका नेता खुलेरै बोलीसकेका छन् । नेपालको संविधान भारतको पनि आन्तरिक राजनीतिको महत्वपुर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । अहिले भारतको प्रतिपक्ष राजनीति र नेपालको राजनीतिक दलहरुको रवैया विश्लेषण गर्दा केही अन्तरिम समाधान भएता पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको तनाव भारतको अर्को आम चुनावसम्म सहजै समाधान नहुने देखिन्छ ।
शक्तिशाली नेताका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र उनको चीन नीति अगाडी आउनासाथ गुरु योजना अन्तर्गत पश्चिमाहरुले नेपाललाई उपयोग गरेर भारतमाथि अर्को किसिमले खेल्न थाले । गैर सरकारी संस्था र सञ्चा्रको चलाखीपूर्ण प्रयोगले मोदीको कद्दावर उपस्थिती मै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकार अत्याधिक बहुमतले बन्न पुग्यो । वस्तुत ः त्यो सरकार आईएनजिओ परस्त सरकार हो । अहिले बिहारमा पनि त्यही रणनीति लगाएर नेपाललाई उपयोग गरेर नितिश–लालु सरकार बन्न पुग्यो । यी घटनाहरुको स्पष्ट संकेत छ, अब आउने निर्वाचनमा भारतमा भ्यागुताको धार्नी सरकार बन्ने सम्भावना छ । स्वाभाविक रुपले त्यस्तो सरकार कमजोर हुनेछ र पश्चिम परस्त पनि । त्यो समुह नै भारतमा चीनको उग्र विरोधमा लागिरहेको समुह हो वर्तमानमा । त्यही सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध सरल बनाउने छ । पश्चिमले भारतलाई भन्ने छ म नेपाललाई तिम्रै आँखाले हेर्छु । त्यसपछि नेपालमा जे गर्न चाहेका छन् उनीहरुले, त्यही गर्नेछन् । यो अवस्थालाई भारतको परम्परावादी कर्मचारी तन्त्र र थाराकान पन्थी ‘रअ’ को सहयोग अवश्य मिल्नेछ । यी सबै अवस्थाले मोदीलाई एउटा विवश नेतामा रुपान्तरित गर्दैछ ।
असभ्य भारत विरोधी
नेपाल–भारतको वर्तमान तनाव र मधेस आन्दोलनलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही हदसम्म छापा सञ्चार माध्यममा समेत अभिव्यक्त भारत र मधेस विरोधी विचारहरुमा प्रयोग भईरहेको शब्द र भाषाले सभ्यता र अनुशासनको तमाम सीमा नाघेका छन् । यस्तो भाषिक प्रयोगले दुनियाँमा नै समस्त नेपाली जातिको अभिव्यक्ति सभ्यतामा ठुलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ । साथसाथै भारत र मधेसको तनावलाई शिथिलिकरण को सट्टा भड्काउने अवस्था निर्माण भएको छ ।
राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
केही समय अगाडीसम्म राजनीतिमा ठुलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को संकेत नदेखिएता पनि अब अपरिहार्य झैँ प्रतीत भएको छ । नेपाललाई राष्ट्र नै विघटन वा असफल वा अराजक हुने स्थितिबाट बचाउन कहीँबाट पनि अन्तिम प्रयत्न हुन सक्छ । र त्यो सेनाको उल्लेख्य भुमिका सहितको हुन सक्छ ।
- See more at: http://www.imagekhabar.com/samachar/detail/56609/68/.meroml#sthash.mwqsOr6o.dpuf
बाबुरामले आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
२०७२ पुष १८ गते १७:४२ मा प्रकाशित
चार दशकभन्दा लामो कम्युनिष्ट राजनीतिलाई छाडेर गैरकम्युनिष्ट नयाँ शक्ति बनाउन लागि परेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अहिले राजनीतिक माहौलमा चर्चा/कुचर्चाका प्रमुख पात्र बनेका छन् ।
आफ्नो कम्युनिष्ट राजनीतिको उत्कर्षमा एकाएक हिंसापूर्ण शसस्त्र विद्रोहका अभियन्ता बनी जंगल पसेको र सशस्त्र विद्रोहलाई एक दशकपछि बिसर्जन गरेका भट्टराई गैरकम्युनिष्ट राजनीतिको मार्गमा हिँड्नु यस स्वप्नकारलाई अलि अनपेक्षित परिवर्तन लागेको छ ।
वहाँ र वहाँकै समूहमा आवद्ध भइरहेका कम्युनिष्ट भावभूमिबाट प्रेरित र क्रियाशील ठूलो जमातमा एकाएक आएको परिवर्तन नाटकीय हो या स्वभाविक समयले अवश्य बताउला । अहिलेलाई भने नयाँ राजनितिक दलको गर्भका रुपमा रहेको नयाँ शक्तिउपर केही विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काँग्रेसको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक धारका नयाँ राजनितिक शक्ति निर्माण गर्ने कोशिस २००७/८ साल देखि नै अनवरत हुँदै आएको हो । काँग्रेस बाहिर र काँग्रेसभित्रबाट पनि त्यसका लागि सघन प्रयत्न भए । डा. डिल्लीरमण रेग्मी, मात्रिकाप्रसाद कोईरालादेखि प्रदिप गिरी हुँदै जगन्नाथ आचार्यसम्मले प्रयत्न गरेकै हुन् ।
यो स्वप्नकारले पनि पछिल्लो अध्यायमा आएर त्यसका लागि एउटा ‘प्लप शो ‘ गरेकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शक्ति सहित नेपाली काँग्रेसलाई झण्डै ठाडो विभाजन (भर्टिकल स्प्लिट) गराएकै हुन् । तर, पनि यी सबै प्रयत्न अन्ततः निष्फल भए ।
मुलुकका यी पछिल्ला दुई दशकमा नेपाली कांग्रेस अकर्मण्य, भ्रष्ट, निश्प्रभावी र विपथगामी भएकै हो । यस्तो अवस्थामा नै इतिहासमा काँग्रेसले सबभन्दा ठूलो विभाजन पनि भोग्यो । तैपनि यसका विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापना भएन । किन ? स्वप्नकारलाई यो अनौठो सैद्धान्तिक र शास्त्रीय (क्लासिकल) प्रश्नको कसीमा बाबुरामजीको प्रयत्नलाई रगडेर हेर्ने उत्सुकता भयो ।
विभिन्न वादका कुरा सुन्दा-सुन्दा वर्वाद भएको मुलुकमा फेरि वादकै चर्चा गर्नु मेरा लागि पनि प्रिय विषय हैन । तथापि यो राजनीतिको सैद्धान्तिक विश्लेषणसँग वाद नआई छाडदैन ।
नेपाली काँग्रेसको विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापित हुन नसक्नुका पछाडि एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक कारण छ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ शक्ति स्थापित हुन सक्ने दुईवटा सैद्धान्तिक धरातल ओगटेर बसेको छ । नेपालमा यसको विकल्पमा कम्युनिष्ट र सक्रिय राजतन्त्रवादी रहेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको एकल धु्रब हुने शौभाग्य कांग्रेसलाई प्राप्त भयो भने सामाजिक न्यायको मुद्दा लिएर स्थापना हुन सक्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल पनि यसले ओगटी दियो । यही सैद्धान्तिक कारणले दक्षिणपन्थी प्रजातान्त्रिक धरातल र प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल कुनै मा पनि नयाँ शक्ति निर्माण हुन सकेनन् ।
अर्को सैद्धान्तिक धरातल कम्युनिष्टमा बारम्बार नयाँ शक्ति स्थापित हुने र पतन हुने प्रक्रिया निरन्तर रह्यो । जनवादी केन्द्रीयताको श्वैर कल्पना /सपना देखाएर संगठन निर्माण गर्ने र निश्चित शक्ति आर्जन गरेपछि बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राजनीतिक नियति बनेको छ । फेरि पनि यही कारणले जनवादी केन्द्रियताको सपना त्याग्न नसक्नेहरुले अर्को कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर पुनः शक्ति आर्जनमा लाग्ने ? यसको पछिल्लो उदाहरण माओवादी पार्टी हो ।
माथिका दुबै सैद्धान्तिक धरातलमा बाबुरामजीको पार्टीलाई खडा हुन सहज देखिन्न । अझ दोस्रो धरातलको सन्दर्भमा त वहाँले गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्न लाग्नुभएको कुरा स्पष्ट गरेबाट त्यो मार्गमा जाने कुरै भएन । नेपालमा भुरेटाकुरे राजनीतिक दलहरु पनि माथिका कुनै न कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा नै उभिएका छन् । अब बाबुरामजी कहाँ उभिने वहाँले स्पष्ट पार्नु पर्छ ।
आफुलाई शास्त्रीय शैली र सैद्धान्तिक धरातलीय आँखाबाट नहेर्न भनिरहेका नयाँ शक्तिका बिज शोचक डा. बाबुराम भट्टराई आफैँमा धेरै शंकाको घेराभित्र पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिक नैतिकताको कसीमा पनि वँहाले जबाफदेहिता देखाइरहनु भएको छैन । यसकारण वहाँले पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्नुपूर्व यी पक्षको प्रष्टीकरण जनतासामु राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केही तत्कालीन मुद्दालाई पक्डिएर क्षणिक मत लिई सत्तारोहण गर्नलाई कहीँको डिजाइनबाट ल्याइएका भारतीय राजनीतिक पात्र अरविन्द केजरीवाललाई डा. भट्टराईले रोल मोडल त मान्नुभएको छैन ? गम्भीर प्रश्न छ ।
दिल्लीको हावासँग हल्लिने नेपाली राजनीतिको चरित्रमा नै वहाँ पनि सामेल हुनुभएको आरोप छ वहाँमाथि । भारतमा बढ्दै गएको ‘मोडरेट कञ्जरभेटिभ ‘ सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरुको पकडलाई चुनौति दिन पश्चिमाहरुले आएनजीओ र सञ्चार माध्यमहरुलाई उपयोग गरेर ल्याइएका व्यक्ति हुन् केजरीवाल । ठीक त्यही मोडेलमा नेपाली काँग्रेेस ‘सेकालारिज्म’ को मुद्दामा ढुलमुले देखिएका बखत भारतीय ‘सेकुलारिष्ट’ पश्चिमाहरुको बिजारोपणबाट जन्माउन लागिएको राजनीतिक शक्ति त हैन नयाँ शक्ति ? यस्तो प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।
जनताका लागि कर्णप्रिय लाग्ने मुद्दा केजरीवालले भ्रष्टचारलाई बनाएका थिए भने डा. बाबुरामले आर्थिक बिकासलाई बनाइरहेका त छैनन् ? यी शंका र तर्कपूर्ण आरोपको सन्तोषजनक जबाफ नयाँ शक्तिका अभियन्ताले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ शक्तिका बीजशेचक डा. बाबुराम नेपालका जातीय पहिचान र क्षेत्रीय पहिचानको जवर्जस्त समर्थक देखिनुभएको छ । यी दुबै साँस्कृतिक राष्ट्रियताका धारणाहरु हुन् । तर, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमाथि भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणमाथि वहाँ मौन रहनु रहस्यमय विषय बनेको छ ।
व्यष्टिगत पहिचानहरुको पक्षपोषण गर्दा ती सबै पहिचानको समष्टिगत पहिचान वा नेपालका अत्यधिक जातिहरुलाई एक सुत्रमा राख्ने महाजातिको विपक्षमा देखिनु अनौठो बिषय बनेको छ । नेपालका अत्यधिक व्यष्टिगत पहिचानहरुको महाजातीय पहिचान हिन्दु हो ।
आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो नेपाली राष्ट्रियताको सांस्कृतिक मूल आधार हो । यो आधारलाई अस्वीकार गर्ने अनि जातीय क्षेत्रीय पहिचानहरुलाई मात्र बढवा दिने हो भने जसरी सोभियत संघ विभाजन भयो, त्यसरी नै नेपाल पनि कालान्तरमा विभाजन नहोला भन्न सकिन्न । सोभियत संघको कम्युनिष्ट सत्ताले जातीय राज्यहरुलाई राख्ने र ती राज्यहरुको योजक सूत्र इसाई साँस्कृतिक राष्ट्रियतालाई निषेध गर्नाले नै विभाजन भोग्नु पर्‍थ्यो ।
पश्चिमाहरुले बाबुरामजीलाई नेपालको यल्त्सीनका रुपमा उपयोग त गरिरहेका छैनन् ? यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ वहाँहरुबाट आउनैपर्छ । पश्चिमाहरु नेपालको विभाजन किन चाहान्छन् भन्ने बारेमा यथेष्ठ लेखिसकेको छु ।
नयाँ शक्ति सामुहिक प्रयत्न र नेतृत्वको शक्ति हुनेछ भन्ने कुरा डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभए पनि यो नेपथ्यका सुत्राधारको पटकथाबमोजिम डा. साहेब नयाँ शक्तिको बीजशेचक मात्र हुुनुहुन्छ भन्ने ठहर छ राजनीतिक बजारको ।
परिदृश्यमा बाबुराम भट्टराई एकल पर्याय हुन् । यसर्थ उनको राजनीतिक नैतिकताले नयाँ शक्तिको ओजलाई पूरा प्रभावित गर्ने छ । आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
वहाँको राजनीतिक जीवनको त्यो अध्याय गलत थियो कि थिएन ? यो प्रश्नको उत्तर पनि वहाँले नैतिकताका आधारमा दिनै पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ शक्तिका लागि सैद्धान्तिक स्पेस
नेपाली काँग्रेस लामो समय देखी राजनीतिको एउटा मुलधार हो । त्यस्तै बहुदलबादी कम्युनिष्टका रुपमा एमाले अर्को मूलधारका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यस अवस्थामा ‘मोडरेट कन्जरभेटिभ ‘ धारको स्पेस खाली देखिन्छ । यो धारमा आउने सम्भावना रहेका कमल थापाको राजनीतिक पतन भएबाट यस धारको सम्भावना अझ बढेको छ ।
नेपालको सह-सांस्कृतिक राष्ट्रियता रहेको भारतमा उदय भएको साँस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग सैद्धान्तिक सामीप्यता राख्ने शक्तिको सम्भावना राम्रो देखिन्छ । तर, यो स्पेसमा आउन सक्ने सम्भावना बाबुरामजीको अतीत र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्न । खाली स्पेसमा नआउने र स्थापित शक्तिहरुलाई विस्थापित गर्ने स्थिति पनि नरहेबाट बाबुरामजीको नयाँ शक्तिबाट निर्मित दल पनि अन्ततः सत्ताको छयांकनका लागि संसदमा जाने एउटा समुह मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/370096/#sthash.l92rOoPS.dpuf
Posted by arun subedi at 5:08 AM No comments: